မော်ကွန်းအင်တာနေရှင်နယ် - Tele RELAY တစ်ခု
ကနျြးမာရေးသတင်းများ အနုပညာ အကြံပြုချက်များ Autres ရုပ်ရှင်ရုံ အပေးအယူ Entertainment
ဆွစ်ဇာလန် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားသည်
Tele RELAY တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ 29, 2020 0
(Keystone / Anthony Anex) ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Covid-19 coronavirus ကူးစက်ခံထားရသောလူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်။ သို့သော်အီတလီ…
ဘယ်လ်ဂျီယံဘယ်လ်ဂျီယံ - လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေပြီဘယ်လ်ဂျီယံ - တစ်နိုင်ငံလုံးသတိရှိနေကြပြီ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေပြီ - ဘယ်လ်ဂျီယံတစ်နိုင်ငံလုံးနိုးနိုးကြားကြားရှိနေပြီလေဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံကတစ်နိုင်ငံလုံးနိုးနိုးကြားကြားရှိနေသည်။ နံပါတ် ၁၇၂၂ ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။ Belga Le...
အိန္ဒိယ - တရားမျှတမှုရရှိရေးသည်အစိုးရ၏ ဦး စားပေးအဆင့်အားလုံးသို့ရောက်ရှိသည်။ PM Modi | အိန္ဒိယ ...
စနေနေ့က ၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi ကနိုင်ငံသားအားလုံးအကျိုးနှင့်တရားမျှတမှုရရှိရေးသည်အစိုးရ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး sabka saath, sabka vikas နှင့် sabka vishwas တို့၏အခြေခံဖြစ်သည်။ မိန့်ခွန်း ...
coronavirus မှတင်ပြသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ "ခြိမ်းခြောက်မှု" ကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကဖြေရှင်းရန်ရုန်းကန်နေရသည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်ခေါင်းဆောင်ရာထူးကိုခေတ္တဆုပ်ကိုင်ထားသောမDonဲဒိုနိုဗန်က coronavirus သစ်သည်ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း၎င်းသည် ...
မော်ရိုကို - Coronavirus - မော်ရိုကို၊ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့မ ၀ င်ရန်တားမြစ်ထားသောနိုင်ငံများစာရင်းတွင်မရှိ
©မူပိုင်ခွင့်၊ ၂၀၁၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်၊ နံနက် ၉း၀၀ နာရီ - မော်ရိုကိုမော်ရိုကိုသည်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်သည့်နိုင်ငံများစာရင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ ဝါဒဖြန့် ...
ဆွစ်ဇလန် - ဆွစ်ဇာလန်ဝိုင်ကိုသောက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်
Swiss Wine Promotion (SWP) – organe de promotion des vins suisses en Suisse et à l’étranger –alancé sa nouvelle campagne en décembre, avec le soutien de la Confédération, sous le slogan «Vins suisses sans hésiter!». Par cette…
Inde: Situation pacifique dans le nord-est de Delhi, frappé par des émeutes: derniers développements…
NEW DELHI: La vie est lentement revenue à la normale dans les localités du nord-est de Delhi samedi, après que la violenceacoûté la vie à au moins 42 personnes au début de la semaine. Plusieurs magasins ont repris leurs activités et les…
မိုက်ကယ်ဘလွန်းဘာ့ဂ်မြို့တော်ခန်းမကိုလက်ခံကျင်းပမည့် Fox News
Fox News Channelaannoncé vendredi qu'elle organiserait une mairie avec l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, marquant sa première apparition sur le réseau en tant que candidat à la présidentielle.L'ancre "Special…
ဆွစ်ဇလန် - မုန်တိုင်း "Bianca" သည်ဆွစ်ဇာလန်မြောက်ပိုင်းကိုပျံ့နှံ့သွားသည်
La Suisseaété malmenée par les rafales de la tempête «Bianca» jeudi soir. Au Chasseral (BE), dans la chaîne du Jura, des valeurs atteignant 172 km/h ont été enregistrées. Tandis qu'au sommet du Säntis (AI), les vents ont…
ဘယ်လ်ဂျီယံ - "၂၀၅၀၊ ဘရပ်ဆဲလ်အတွက်ပိုကောင်းသည်" ။ ယနေ့ပေါက်ရောက်နေသောအတွေးအခေါ်များ
«2050, Bruxelles en mieux»: des idées qui germent dès aujourd’hui «2050, Bruxelles en mieux»: des idées qui germent dès aujourd’hui Bruxelles « neutre en carbone » en 2050. Voilà pour l’objectif. Sur papier. Comment y arriver ...
123 ... 445 လာမယ့်
LinkedIn အော်တို Publish မှ WP မှပံ့ပိုးသည် : XYZScripts.com